By soniya on	 14th August 2019 Highlights, समाचार, सेलिब्रिटी
आर्यन सिग्देल अभिनित ‘हजार जुनीसम्म’ विहिबार रिलिज हुँदैछ । हालै उनले पात्र स्थापना, करियर र मुडको बारेमा कुरा गरे । सिग्देलका केही अभिव्यक्ति फिल्म समाजशाष्त्र, बजार र स्टारको उत्थान एवं पतनमा रुचि राख्नेका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ बन्न सक्छ ।
कुरा सुरु गरौं, फिल्म हजार जुनीसम्मदेखि । विकास आचार्य निर्देशित फिल्ममा उनी सिद्धान्त क्षेत्री नामक एक मध्यमवर्गीय अधवैंशे पात्रको भूमिकामा छन् । यस्तो एउटा चरित्र जसले प्रेमका लागि १४ वर्ष गुजार्छ ।
रोमान्टिक भूमिकामा उनले यसअघि अभिनय गरेको फिल्म कायरा फ्लप भएको थियो । उनलाई लाग्छ, कथामै राम्रो काम हुन सकेन । यद्यपी, रिलिज अगाडि फिल्म उत्कृष्ट रहेको बताउने गर्थे ।
आर्यन सकियो, भाग्यले चम्केको कलाकार भनेर लेख्दा तपाईँहरुलाई रमाइलो लाग्छ ? यसरी फिल्म संस्कृतिको विकास हुन्छ ? एउटा फिल्म नचल्दा करियर नै सकिन्छ ? गफगाफमा आर्यनले मिडियाका रिपोर्टलाई प्रश्न गरे ।
यो महत्वपूर्ण लाइन हुनसक्छ । दस वर्ष लामो करियरको उत्तराद्र्धमा आएर सिग्देललाई स्टार हुनु छैन । स्टार हुन नम्बर वान फिल्ममा काम नगरेको उनको तर्क छ । अर्कोतर्फ उनले नेपालमा कलाकारको अवस्था यकिन नभएकाले भोलिको अवस्था भन्न नसक्ने पनि बताए ।